Maxkamadda Kampala oo wax dembi ah ku weyday laba hablood oo Soomaali ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxkamadda Magaalada Kampala ee dalka Uganda, ayaa waxay wax dembi ah ku weyday laba hablood oo Soomaali ah, oo muddo shan bilood ku dhow ku xirnaa xabsiyada Magaaladaasi.
Hablahaan waxaa lala soo qabtay sideed nin oo kale oo toddobo ka mid ah ay Soomaali yihiin, waxaana bishii September laga soo qabtay xaafada ay ku badan tahay Soomaalida Kampala, markii looga shakiyay inay cilaaqaad la lee yihiin Al Shabaab.
Xeer Ilaalinta Qaranka, ayaa waxay Maxkamadda u gudbisay cadeymo muujinaaya in wax dembi ah lagu haayay labadaasi hablood, oo lagu kala magacaabo Hodan Axmed oo 23 sano jir ah iyo Yaasiin C/laahi oo 20 sano jir ah.
Maxkamadda, ayaa Isniintii shalay iclaamisay in wax dembi ah lagu waayay hablahaasi, isla-markaana ay xaq u lee yihiin in dib ay markale u helaan xoriyadooda.
Maalmaha soo socdo, ayaa waxaa sidoo kale lagu wadaa in Maxkamaddu ay u fariisito kiiska ragga kale, ee lala xiriirinaayo falalka argagaxiso, ee Somalida u badan.
Xildhibaan Jeesoow “Shacabka Kismaayo waxay lamid yihiin shacabka reer Falastiin oo kale”